ခရစ်တော်မပါဝင်သော ခရစ်ယာန်ဘာသာကို အမှန်ပြုပြင်ခြင်း | Real Conversion
ခရစ်တော်မပါဝင်သော ခရစ်ယာန်ဘာသာကို အမှန်ပြုပြင်ခြင်း
၂၀၁၂၊ မတ်လ၂၅ရက်၊ သခင်ဘုရားနေ့၊နံနက်ပိုင်း၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ် ခြင်းအသင်းတော်၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
“အကြောင်းမူကားယေရှုခရစ်တည်းဟူသောလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံတော်မူ သောသခင်မှတပါး၊ အဘယ်အရာကိုမျှသင်တို့တွင် ငါမသိလိုဟုငါစိတ်ပြငှန်း ခြင်းရှိ၏”(၁ကော ၂း၂)။
ဒီကနေ့အကျွန်ုပ်၏တရားဒေသနာခေါင်းစဉ်ကို “ခရစ်တော်မပါဝင်သောခရစ်ယာန်ဘာ သာကို အမှန်ပြုပြင်ခြင်း!”ဟူ၍ ခေါင်းစဉ်တပ်ပါမည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်ုပ် တို့၏ဘာသာရေးတခါးကို ပိတ်နေလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ယေရှုကိုမကောင်းမှုပြည့်နှက်သော နေ့ရက်အချိန်အခါတွင်ကားတိုင်ပေါ်အသေသတ်ခဲ့ကြသည်ဟူသော တရားဒေသနာတော် ကိုသင်လည်းကြားဖူးနား၀ရှိပါမည်။ အနည်းကျဉ်းအားဖြင့် ခရစ်တော်၏အကြောင်းကို တရားဒေသနာပြောကြားကြသည်။ ခရစ်တော်၏ ကားတိုင်ပေါ်အသေသတ်ခြင်းကိုမူ မဟောမပြောသလောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ခရစ်တော်ဘုရားနှင့်ကားတိုင်ပေါ် အသေခံခြင်းဒေသနာကို ဘယ်နေရာ၌နားထောင်ကြရမည်နည်း? အီစာတာပွဲတော်နေ့ အချိန်အခါ၌လည်း တရားဟောဆရာတို့သည် ခရစ်တော်ဘုရား၏ပြင်း ထန်စွာခံစားရခြင်းအကြောင်းကို မဟောကြားကြပေ! ဒီကနေ့တွင် ခရစ်တော်ဘုရား သခင်အား၊အသင်းတော်တံခါးပိတ်ထားကြပြီဖြစ်သည်။ သူသည်အသင်းတော်ပြင်ပတွင် မတ်တပ်ရပ်နေရပြီး လောဒိကိမြို့ရှိအသင်းတော်ကဲ့သို့ဖြစ်နေပေပြီ!
ဒေါက်တာမိုက်ကယ်ဟောတန်က “ခရစ်တော်မပါဝင်သောခရစ်ယာန်ဘာသာ” ဟူ၍ခေါ် သောစာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့ပါသည်။ (Bakနမ ဩသုsယ ၂၀၀၈). ဒေါက်တာဟောတန်ကပြော ကြားသည်မှာ ယနေ့၌တရားဟောဆရာများ၊ ခရစ်တော်ကားတိုင်ပေါ်အသေခံခြင်းအ ကြောင်းကို မဟောကြားတောပေ။ ထိုသူပြောကြားသည်မှာ၊
.ခရစ်တော်မပါဝင်သော ခရစ်ယာန်ဘာသာသည်(နေရာတကာ)အပြောင်းအလဲမ လိုလားသောတွေးခေါ်သူများနှင့်အခြားဂိုဏ်းကနအသီးသီးတို့၌ စီးဆင်းနေပေပြီ။ ခရစ်တော်သည် အပြစ်သားတို့၏တခုတည်းသော မျှော်လင့်ရာဖြစ်ခြင်းကို အာရုံ စူးစိုက်မှုလျောပါးစေပါသည်။ အရာရာကို ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းခြင်းအားဖြင့် တိုင်းသွားကျွန်ုပ်တို့၏ပျော်ရွင်ခြင်းဖြင့် တိုင်းထွားနေကြပြီဖြစ်သည်။ အကယ် ၍ ထိုသို့ဖြစ်လာခြင်းသည် အမှန်အရေးပါမှုဖြစ်နေပါလျှက်၊ ယနေ့အမေရိက ရှိအသင်းတော်များသည် စိတ်၏ခံစားမှုကလွှမ်းမိုး၍ လက်တွေ့ကျသေအသင်း တော်အကြောင်းအရာနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသောအသင်းတော်၊အထောက်အကူဖြစ်စေ သောအသင်းတော်၊ အောင်မြင်သောအသင်းတော် ကမ္ဘာတခုလုံးနှိုင်းယှဉ်စရာ၊ ကြေးမုံကဲ့သို့ဖြစ်လာပြီ၊ ယနေ့အသင်းတော်၊တော်တော်များများ၌ လောကီပညာ ရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့်ကိုယ်အားကိုကိုး၊ အဖွဲ့အစည်းများကစိတ်ကျေနပ်လက်ခံစရာ အကြောင်းမရှိသော အသင်းတော်များကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ကြရတော့ပေ။ (Christless Christianity, pp. 26, 15-17).
ဒေါက်တာဟောတန်သည် ပြောင်းလဲခြင်းကိုမလိုလားသော နှစ်ခြင်းအသင်းတော်က လေယဉ်မောင်းတဦးပေးအပ်သောဒေသနာခေါင်းစဉ်များကို ကိုးကားခဲ့ပါသည်။ ဒေသနာ တော်ခေါင်းစဉ်များသည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
“ဖိအားကို မည်ကဲ့သို့ကျော်လွှားမလဲ” (ibid., p.49).
ခရစ်တော်ကားတိုင်ပေါ်အသေခံခြင်းကိုကား မဖေါ်ပြထားပေ။ ခရစ်တော်ဘုရားကို လက် ခံကြိုဆိုခြင်းမပြုသော အသင်းတော်များ၌ အမင်္ဂလာသက်ရောက်ပါစေသတည်း!
ပြောင်းလဲခြင်းကို မလိုလားသောအသင်းတော်များသည်၊ မည်သို့ပျော်ရွင်ခြင်းနှင့် အောင်မြင်ကြီးပွါးရေးတရားဒေသနာတော်ကို၊ ကျမ်းပိုဒ်တပိုဒ်ပြီးနောက်တစ်ပိုဒ်၌ပြော ကြားသည်။ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ပညတ်တော်နှင့် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဟောကြားခြင်းမ ကြားရလုနီးပါးဖြစ်လာပါပြီ။
“အကြောင်းမူကား၊ ယေရှုခရစ်တည်းဟူသော လက်ဝါးကားတိုင်မှာ အသေခံတော်မူသော သခင်မှတပါး၊ အဘယ်အရာကိုမျှ သင်တို့တွင် ငါမသိလိုဟု ငါစိတ်ပြဌာန်းခြင်းရှိ ၏(၁ကော ၂း၂) ။
ဤကျမ်းပိုဒ်ကဲ့သို့ပြောကြားသော တရားဟောဆရာတို့၏ တရားဟောသံကိုကြားနာဖို့ အင်မတန်ရှားပါးနေပေပြီ။ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့အားမစတော်မူပါ!ခရစ်တော်ဘုရားသခင်သည်လောဒိကိအသင်းတော်အားမိန့်ကြားတော်မူသကဲ့သို့များစွာသော၊ အသင်းတော်တို့ အားမိန့်တော်မူနေပါ သည်။
“ထိုသို့အအေးမဟုတ်အပူမဟုတ်၊ နွေးရုံရှိသောကြောင့်ငါ၏ခံတွင်းသည် သင့်ကိုထွေးလုပြီ။ သင်ကလည်းငါသည်ဥစ္စာရတတ်၏။ ဘဏ္ဍာများကို ဆည်းပူးပြီ။ တစုံတခုကိုမျှမလိုဟုပြောဆို၍ ကိုယ်တိုင်ပင်ပန်းခြင်း၊ သနား ဖွယ်ဖြစ်ခြင်းဆင်းရဲခြင်း၊မျက်စိကန်းခြင်း၊ အဝတ်အချည်းစည်းရှိခြင်းဖြစ် သည်ကိုမသိပါတကား” (ဗျာဒိတ် ၃း၁၆-၁၇)
ကျွန်ုပ်လူငယ်အရွယ်တွင်၊ ဒေါက်တာအာရ်၊ ဂျီလီနှင့်ဒေါက်တာဒဗလျူးအေ.ခရစ္စ် ဝေလ်တို့ဟောကြားသော ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းနားထောင်ဖို့ မိုင်ပေါင်းများစွာသို့ကား မောင်းသွားနေရပါသည်။ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်ခရစ်တော်အသေခံခြင်းသတင်းကိုကြား နာခဲ့ပါသည်။ သို့သော်၊ ကနေ့အသင်းတော်များသည် ပေါ့လ်တေးသံတွေအားဖြင့် တရား ပလ္လင်၌သီဆိုဧကျူးကြသည်။ ရိပ်ခ်ဝါရန်က အသင်းတော်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုတိုး မြှင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုသူ၏နည်းလမ်းများတွင်၊
၇။”အသင်းတော်”နှင့်နှစ်ခြင်းကို အသင်းတော်နာမည်အသုံးပြုခြင်းကို ဖယ်ရှားခြင်း
၈။ခရစ်တော်ဘုရား၏ကားတိုင်ပေါ်အသေခံခြင်းအကြောင်းကို ဟောပြောခြင်းလျှော့ ပါးလာခြင်း
၉။”ကယ်တင်ခြင်း”၊ “ပျောက်ဆုံးလူသား”၊ “မီးငရဲ” “အသွေးတော်”နှင့်အသစ်တဖန်
၁၀။ပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့် ကယ်တင်ခြင်းကို အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲသူမှ “မယုံကြည်သူ” အဖြစ်သို့ “ပြောင်းလဲပေးခြင်း”။
တရားဒေသနာတော်က တစုံတခုကိုလုပ်စေလိုငှါ လှို့ဆော်ပေးသည်။ များသောအားဖြင့် တရားဒေသနာတော်များသည် ယေရှုခရစ်ကားတိုင်အသေခံခြင်းအကြောင်းကို ရှားပါးသ လောက်မဟောကြတော့ပေ။
–၂၀၀၅ခုနှစ်၊မေလ၅ရက်နေ့တွင် Pew Forum on Religion and Public Life မှ ရိပ်ခ်ဝါ ရန်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ဖန်ဒမင်တယ်လ်လစ်ဟူသောစကားသည် ၁၉၂၀တုန်းက၊ ယုံကြည်ခံယူချက်များ၅ချက်ထဲမှ၊ ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တင်းကြပ်သော ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့၏ ကျဉ်းမြောင်းသောအမြင်ပင်ဖြစ်သည်။” ဟူ၍ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။ ထိုစာအုပ်၏ခံယူချက်က အဘယ်နည်း? သူအဓိကဖေါ်ပြလိုသောအချက်သည် “ဖန်ဒမင်တယ်လ်”ကို အဓိကထားပြောလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသူက၎င်းကို “စည်းကမ်း တင်းကြပ်ခြင်း”နှင့် “ကျဉ်းမြောင်းခြင်း”ဟူ၍ပြောကြားသည်
၁။အမှားမပါသော သမ္မကျမ်းစာ၏ အခွင့်တန်ဖိုး
၂။အပျိုစင်မှ မွေးဖွါးခြင်းနှင့် ယေရှုခရစ်တော်ဘုရား
၎င်းတို့သည် ရိပ်ခ်ဝါရန်က “တင်းကြပ်သောအယူနှင့်” “ကျဉ်းမြောင်းခြင်း” ဟူ၍ခေါ် သောအဓိကကျသော အခြေခံမူ၅ချက်”ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၌ဖေါ်ပြသော အခြေခံ၊ယုံကြည်ခံယူချက်များကို “တင်းကြပ်ခြင်း”နှင့်”ကျဉ်းမြောင်းခြင်း”ဟူ၍ ယုံကြည် ပါလျှက်ထိုအရာထဲက မည်သည့်အချက်ကာ ကျဉ်းမြောင်းလွန်းသည်ကို ကျွန်ုပ်အား ထောက်ပြပေးပါ! ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် တခုခြင်းစီကိုသဘောတူ လက္ခာထားပါသည f! “ယေရှုခရစ်တော် ကားတိုင်ပေါ်အသေခံခြင်းကိုမသိသော မည်သို့သောသင်းအုပ် ဆရာရှိလျှင် ကျွန်ုပ်အားထောက်ပြပေးပါ” “တိုင်တော်နား”ဓမ္မသီချင်းသီဆိုသည်!
(၁၈၂၀-၁၉၁၅၊ ဖန်နီဂျေ.ခရောစ်ဘီ သီကုံးရေးသားသော
“တရားဟောမင်းသား”စပါဂျန်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ကြီးမားသောလိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်း သည်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များအားဖျော်ဖြေရေးသဖွယ်အသင်းတော်၌ ဝိညာဉ်တိုးပွါးလာစေ ပါသည်။ ရိပ်ခ်ဝါရန်၏ ဘ၀ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမောင်းနှင်ခြင်းစာအုပ်သည်မိုက်မဲ့ခြင်း ဖြစ်၏! “ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမောင်းနျင်ခြင်း”လှုပ်ရှားမှုကို ကျွန်ုပ်မကြိုက်မနှစ်သက်ပါဘူး၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး”ယေရှုခရစ်ကားတိုင်ပေါ်အသေခံခြင်း”ဟူသောတရားဒေသနာတော်ကို သာကြားနာဖို့လိုပါသည်။ ဓမ္မသီချင်းကို ထပ်မံ၍သီဆိုပါသည်!
“ယေရှုခရစ်တော်၏ ကားတိုင်အသေခံခြင်း” သည်သာ၊သမ္မာကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံး၏ အဓိ ကပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်၊ သူ့၏တပည့်တော်များကို မိန့်တော် မူသည်မှာ၊
“ကိုယ်တော်ကလည်း၊ပရောဖက်ဟောကြားသောစကားများကိုယုံနိုင်အောင်ဉာဏ် မရှိ၊ စိတ်ခိုင်မာသောသူတို့၊ ခရစ်တော်သည်ဤသို့ပင် အသေခံ၍ မိမိဘုန်းစည်း စိမ်တော်ကို ဝင်စားရမည်မဟုတ်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏၊ ထိုအခါမောရှေ၏ကျမ်း စာမှစ၍ ပရောဖက်တို့၏ ကျမ်းစာများ၌ ကိုယ်တော်ကိုရည်မှတ်၍ရေးသားသမျှ သောကျမ်းစာချက်အနက်ကို ရှင်းလင်းစွာဖေါ်ပြတော်မူ၏”(လုကာ ၂၄း၂၆-၂၇)။
“မိမိနှင့်ပါတ်သက်၍ သမ္မာကျမ်းစာ၌ ရေးသားသည်ကို ရှင်းလင်းဖေါ်ပြခဲ့ပါသည်။” မိမိ အကြောင်းကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ရေးသားဖေါ်ပြသည်ကို ရှင်းလင်းဖေါ်ပြပေးပါသည်။ ထိုသို့ရေးသားသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့လည်းခရစ်တော်ဘုရားသခင်၏ အကြောင်းစုံကို သူတပါးတို့အားရှင်းလင်းဟောကြားရမည်ဖြစ်ပါသည်။” ခရစ်တော်ပါဝင်ခြင်းမရှိသော ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်နေပြီးလား? ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းတော်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တရားပ လ္လင်ပေါ်က “ခရစ်တော်နှင့်ပါတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို ဖေါ်ပြဖို့လိုပါသည်။ ဝတ်ပြုအစည်းအဝေးတိုင်း၌ အပြစ်သားများနှင့် သူတော်စင်များအားလုံးကို ယေရှုခရစ်၏ ကားတိုင်ပေါ်အသေခံခြင်း! တရားဒေသနာတော်ကို ဟောကြားဝေငှာဖို့လိုပါသည်။ “ပြော ပြရန်ဝတ္တုရှိ” ဟူသောဓမ္မသီချင်းကို ကျွန်ုပ်အားရနှစ်သက်ပါသည်။
- ရှေဝတ္တုဟောင်းကိုပြောလေ၊ အထက်မမြင်အရာ
(၁၈၃၄-၁၉၁၁ အေ၊ ကတ်သရိန်း .ဟန်ကီသီကုံးသော “ရှေ့ဝတ္တုဟောင်း”)။
ရိပ်စ်ဝါရန်၏ “ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအသင်းတော်ကို မောင်းနှင် “ခြင်းသည် ယနေ့အဖို့ တခုတည်းသောအများမဟုတ်တော့ပြီ၊”ချမ်းသာကြွ၀ခြင်းသတင်းကောင်း”သည်လည်း အသင်းတော်များအသီးသီးတို့၌ ထိုကဲ့သို့ခံယူပြောကြားနေကြပြီဖြစ်သည်။ ဂင်းနစ်ခုပ်ပ လန်းတီ.ဒီဂျစ်၊ ဘန်နီဟိန်း၊ ဂျော်စီမေယာနှင့် ဂျူအေလ်အိုးစတင်န်တို့က ထိုတရားဟော ဆရာတို့ကိုတီဗီဖန်သားပြင်ပေါ်ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။ ဂင်းနစ်ခုပ်ပလန်းပြောကြားသည်မှာ၊ “သင့်အတွင်းနှလုံးထဲ၌ ဘုရားသခင်အသက်မရှင်ပေ၊ သင်သည် ကိုယ်တိုင်အသက်ရှင် ခြင်းဖြစ်သည်၊ သင်သည် သီးသန့်ဘုရားသခင်၏ အထူးပါဆယ်ထုပ်ပင်ဖြစ်၏” သင်ဟာဘုရားသခင်ပေါဗျာ! မှားယွင်းသောခံယူချက်ပါ! လူသားတို့သည်ထိုကဲ့သို့ အဓိပ္ပါယ်မဲ့သောစကားကိုယုံကြည်ကြသည်! “ဘုရားသခင်က သင့်ကိုဘယ်လိုနည်း ဘဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်နေသည်”ဟူ၍မှားယွင်းစွာတရားဟောကြသည်။ ဒေါက်တာဟောတန်ပြော ကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းသည်နည်းတူ၊ လူသားတို့သည်အကျင့် စာရိတ္တအားဖြင့်ဆိုးသွန်းပါသဖြင့် ခရစ်တော်၏အစားထိုး အသေခံပေးခြင်းကြားဝင် ခြင်းမလိုအပ်ပေ။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်ပျော်ရွင်စေလိုသူဖြစ်သည်။ (Hသမအသညယ ငဘငိ.ယ စစ. ၇၁ယ ၇၂). အကယ်၍ သင်လည်းထိုသူ၏အတွေးအခေါ်သည် မှားယွင်းနေသည်ဟုခံစားလျှင်၊ ၂၀၀၅၊ဇါန်လ၂၀ရက်နေ့က၊ဂျူအယ်လ်အောစတန်နှင့်လေရီကိန်းတို့၏ အမေးအဖြေကဏ္ဍ ကို နားထောင်ကြည့်ပါ။
အောစတန်ပြောကြားရာတွင် လူသားတို့ခရစ်တော်ကို ငြင်းဆန်ခြင်းကြောင့် မည်ကဲ့သို့ဖြစ်လာမည်တော့မသိပါ၊ ထိုအခါ.ကိန်းက၊ ဂျူးလူမျိုး၊ မူဆလင်နှင့် ခရစ်ယာန်မဟုတ်သော သူတို့အကြောင်းမေးမြန်းခဲ့သည်။ ထိုသူတို့က မှားယွင်းကြတယ်မဟုတ်ပါလား? (ဟုကိန်းမေးရာတွင်) အောစတန်ဖြေကြား သည်မှာ၊သူတို့မှားတာမှန်တာကိုတော့ကျွန်ုပ်မသိပါဘူး၊ ..သို့သော် ဘုရား သခင်သည် လူသားတို့၏နှလုံးသားကို တရားစီရင်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တော်၊ အဖေနှင့်အတူ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာနေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသူတို့၏ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကို အသေအချာမသိရပါ။ သို့သော်သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ချစ်ကြပါသည်။ အသေအချောတော့နားမလည်ပါဘူး၊ ထိုသူတို့၏ရိုးသားခြင်းကိုတော့မြင်တွေ့ပါသည်။ ဒါတွေကြောင့် အသေအချာ မပြောတတ်ပေ။ (cited in Horton, ibid., pp.74,75).
“ခရစ်တော်ဘရားကို ငြင်းဆန်သောသူတို့၌ မည်ကဲ့သို့ဖြစ်ပျက်လာမည်ကို အသေ အချာမသိပေ။ ခရစ်တော်ကိုငြင်းပယ်သောသူတို့ မည်ကဲ့သို့ဖြစ်လာမည်ကို “ကျွန်ုပ်မ သိပါ” လူသားတို့သည်ခရစ်တော်ကို လိုအပ်သည်၊ မလိုအပ်သည်ကို “ကျွန်ုပ်မသိပါ”! အောစတန်၏ သတင်းစကားသည် ခရစ်တော်မိန့်တော်မူသော သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ကွဲလွဲနေ ပါသည်။ မိန့်တော်မူသည့်ကား “ယေရှုက ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏။ သမ္မာတရားဖြစ်၏။ အသက်လည်းဖြစ်၏ ငါ့ကိုအမှီမပြုလျှင်အဘယ် သူမျှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရ”။ (ယောဟန် ၁၄း၆)။ မစ္စတာအောစတန်မသိသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ fအသေအချာ သိပါသည်။ ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသော နုတ်ကပတ်တရားကိုကျွန်ုပ် အသေအချာ သိပါသည်။
“အကြောင်းမူကား၊ ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့၌ လက်ဝါးကပ်တိုင်တော် တရားသည် မိုက်သောတရားဖြစ်၏။ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သော ငါတို့၌ ထို တရားသည်ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။ (၁ကော ၁း၁၈)
“သခင်ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်လော။ ယုံကြည်လျှင် သင်နှင့်သင်၏အိမ်သူ၊ အိမ် သားတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။ (တမန် ၁၆း၃၁)
“ထိုသခင်၏နာမတော်မှတပါးငါတို့ကိုကယ်တင်နိုင်သောနာမတစုံတခုမျှကောင်း ကင်အောက်လူတို့တွင်မပေါ်မရှိဟု ပေသရုသည် ထိုသူတို့အားမြွတ်ဆို၏။ (တမန် ၄း၁၂)
ထို့ကြောင့် “အကြောင်မူကား၊ ယေရှုခရစ်တည်းဟူသော လက်ဝါးကားတိုင်မှာ၊ အသေခံ တော်မူသောသခင်မှတပါး၊ အဘယ်အရာကိုမျှသင်တို့တွင် ငါမသိလိုဟုငါစိတ်ပြငှါန်း ခြင်းရှိ၏။ (၁ကော၂း၂)။
ဒီကနေ့ခေတ်၊ ထူးဆန်းသောနေ့ရက်များတွင်၊ လက်ဝါးကားတိုင်တရားတော်ကိုများ သောအားဖြင့် အပြောင်းအလဲမလိုလားသောကျမ်းစာကို ယုံကြည်သောအသင်းတော် များဟောကြားခြင်းမရှိတောပြီ။ ထိုတရားဒေသနာ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများထံဟောရ မည်၊အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲသောသူတို့ကိုဟောရမည်၊ သို့ပါသော်လည်း ခရစ်ယာန်ယုံ ကြည်သူများ၎င်း၊ လက်ဝါးကားတိုင်တော်တရားတော်ကို နားမထောင်လိုကြတောပေ! ထိုအသင်းတော်၌ရှိ ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းနေပါသည်။ ထိုတရားကို ဆယ်စုနှစ်အဆက်ဆက်ကြားနေပါလျှက်၊ ခရစ်တော်ဘုရားကိုချစ်၍ မိမိတို့၏အသက်တာ်ကို ဆက်ကပ်အပ်နှံရန်လှိုဆော်ပေးပါသည်။ ခရစ်တော်ဘုရား၏ လက်ဝါးကားတိုင်တရားကို အဆက်ဆက်ကြားရသော ကနဦးခရစ်ယာန်တို့နှင့် ယနေ့ခြား နားလျှက်ရှိပါသည်!
“ငါသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ၊ လက်ဝါးကားတိုင်မှာအသေခံပြီ၊ သို့သော်လည်း အသက်ရှင်သေး၏။ ထိုသို့ဆိုသော် ငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင် ခရစ်တော်သည် ငါ၌ရှင်တော်မူ၏(ဂလာ ၂း၂၀)။
“ငါဖြစ်လျှင်၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ လက်ဝါးကားတိုင်တော်မှတပါး အဘယ်အရာနှင့်မျှဂုဏ်ယူဝါကြွားခြင်းမရှိပါစေနှင့်၊ ထိုလက်ဝါးကားတိုင်မှာ ဤလောကသည် ငါ့အဖို့ရိုက်ထားခြင်းကို ခံလျှက်ရှိ၏။ ငါသည်လည်း ဤလောကအဖို့ ရိုက်ထားခြင်းကိုခံလျှက်ရှိ၏။(ဂလာ ၆း၁၄)။
ဘုရားသခင်မစတော်မူပါ! ခရစ်တော်ဘုရားလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်အသေခံခြင်းတရားကို ကျွန်ုပ်တို့၏တရားပလ္လင်ပေါ်ကနေ ဟောကြားကြပါစို့! ခရစ်တော်ဘုရား၏ကားတိုင်ပေါ် အသေခံခြင်းတရားမရှိဘဲ မည်သူတစ်ဦးတယောက်အဖို့ မျှော်လင့်တရားမရှိပါ! “သိုးသူ ငယ်၏ ကားတိုင်တော်နား” ဓမ္မသီချင်းသီဆိုသည်!
(၁၈၂၀-၁၉၁၅. ဖန်နီး ဂျေခရာ့စ်စဘီ သီကုံးသော “တိုင်တော်နား”)။
ကျွန်ုပ်သည် တရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၏ အသင်းသားအဖြစ် ၂၄နှစ်ကြာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဆရာဒေါက်တာတီမောသေလင်းသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း သုတေသီတစ်ဦးဖြစ် သည်၊ ဒေါကတာလင်သည် နောက်ဆုံးအသက်၉၈နှစ်အထိ အသင်းတော်၌ တရားဒေသ နာဟောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုဆရာဟောချက်တို့သည် ကျွန်ုပ်၏အတွေးအခေါ်ထဲစီးဆင်း နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်အားပြောကြားခဲ့သည်မှာ အခြားသောသူတို့ထံ ဧဝံဂေလိသတင်း ကောင်းပြန့်ကြားရန် ဘုရားသခင်၏အလိုရှိသည်ဟု အကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်” ဟူ၍ ဟောကြားခဲ့သည်။ ထိထိမိမိပြောသောစကားဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်ထိုစကားကို နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အကျွန်ုပ်အနေဖြင့် အမှုတော်အတွက်လုပ်သင့်သ လောက်ဆောင်ရွက်နေပြီဘဲဟူ၍ တွေးမိ၏ ဒေါက်တာလင်းပြောသမျှမေ့ပစ်ခဲ့ပြီ။ လွန်ခဲ့ သောအင်္ဂါညတွင် ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်အားပြောပြနေသည်။ “ထိုဆရာပြော ကြားမှန်သည် ကိုသင်အသိဖြစ်သည်”ဟူ၍ဆို၏။ “ထို့ကြောင့် အင်တာနက်ပေါ်မှတစ်ဆင့် ဧဝံဂေလိ တရားဟောကြားခြင်း အောင်မြင်နေခြင်းဖြစ်သည်။” ထိုအတွေးအခေါ်အတွက် စိတ်လှုပ် ရှားခဲ့၏သေချာ စွာဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်း။ သည်မနက်ဟောကြားသော ဤဒေသနာတော် လည်းအင်တာနက်ဖြင့် ကမ္ဘာအန့SHဟောကြားရန်ဖြစ်သည်။
အသင်းတော်၌ ဟောကြားသောဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းသည် ဒီလော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ် မြို့လည်းဟောကြားနေပါသည်။ ခရစ်တော်သခင်အဖို့၊ သင်သည်လမ်းဆုံး၊ လမ်းခွ၊ ချေး ဆိုင်၊ ကောလိပ်တို့ဆီသွားရောက်ပြီး ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဟောကြားပါ၊ ကျွန်ုပ်ဤ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၌ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းအဖို့ အကောင်းဆုံးကူညီပေးမှာဖြစ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝတ်ဆိုဒ်အားဖြင့် ကမ္ဘာအဆုံးဧဝံဂေလိထိုးဖောက်ရပါမည်။ ခရစ် တော်၏အသေခံခြင်းတရားဒေသနာတော်ကို ဘာသာစကား၁၆မျိုးဖြင့် ဝတ်ဆိုက်ဒ်မှတ ဆင့်ဟောကြားနေပါသည်။ နောက်အပတ်ဆိုလျှင် ဘာသာစကားအသစ်၂မျိုးဖြင့် ထပ်မံ ထုပ်လွင့်ပါမည်။ ဘာသာစကားပေါင်း၂၀အထိ ဤနွေရာသီမကုန်မီထုတ်လုပ်နိုင် ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ နောက်အပတ်ယေရှုကားတိုင်ပေါ်အသေခံခြင်းကိုမူ ဘာသာစကား ၁၈မျိုးဖြင့်ထုတ်လွင့်ပါမည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား၊ စပိန်ဘာသာစကား၊ ရုရှားဘာသာ စကား၊ ပြင်သစ်ဘာသာစကား၊ ပိုလန်ဘာသာစကား၊ အူဒို(ပါကစ္စတန်)ဘာသာစကား၊ ဟိန္ဒီ(အိန္ဒိယ)ဘာသာစကား၊ လာအိုဘာသာစကား၊ တာကာလောက်(ဖိလိပိုင်)ဘာသာ စကား၊ မြန်မာဘာသာစကား၊ ကိုရီးယားဘာသာစကား၊ ဂျပန်ဘာသာစကား၊ အင်ဒိုနီးရှားဘာသာစကား၊ ဂိုးဂိုးတရုတ်ဘာသာစကား၊ ရှေ့ခေတ်တရုတ်ဘာသာစကား၊ အမေးနီးယားဘာသာစကား၊ကန်ဘောဒီယားဘာသာစကားနှင့် အာရေမိဘာသာစကား တို့ဖြင့်၊ ထုတ်လွင်ပါမည်၊ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်တမ်းအရ ဤတရားဒေသနာတော်သည် ၁၆၈ နိုင်ငံအသီးသီးတို့ ဖမ်းယူနားထောင်မည်ဖြစ်သည်။ ဆွန်ဇလန်မှ၊ နီပေါနိုင်ငံမှ၎င်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှ၊ အိုင်စလန်နိုင်ငံသို့၎င်း၊ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံမှအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသို့ ၎င်း၊ အီသယိုပီးယားနိုင်ငံမှ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံသို့၎င်း၊ မိုရိုဂိုနိုင်ငံမှအိုဗွီရီကော့သို့၎င်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှလေဗနှုန်းသို့၎င်း၊ ဆွတ်ဇလန်နိုင်ငံမှရိုမီးနီးယားသို့၎င်း၊ ထိုင်ဝမ်မှမိန်းလန်း တရုတ်နိုင်ငံသို့၎င်း၊ ကော့စတာရီကာမှမလေးရှားသို့၎င်း၊ ရုရှားနိုင်ငံမှစပိန်သို့၎င်း၊ ကိုးရီးယားနိုင်ငံမှပိုလန်နိုင်ငံသို့၎င်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှ မက်ဆီဂိုနိုင်ငံသို့၎င်း၊ ဩစတြေးလျ နိုင်ငံမှဂျာမနီနိုင်ငံသို့၎င်း၊ ယူကရိန်း နိုင်ငံမှပြင်သစ်နိုင်ငံသို့၎င်း၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှဂျပန် နိုင်ငံသို့၎င်း၊ ပျူတိုရီကို၊ကူဝိတ်၊အီတလီ၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ မြန်မာ၊အီဂျစ်၊ အာရပ်ကမ္ဘာ အသီးသီး၊ အီရီလန်ယူဂန်ဒါ၊ ဂျော်ဒန်၊ အစ္စရေး၊မိုရိုဂို၊ နယူးဂီလန်မာဒါကစ်စကာ၊ အယ်ဂျီးရီးယား၊ ဟေတီ၊ မာလွီးဆိုက်ပရက်စ် နှင့်ပယ်လယ်ကျွန်းစုများအထိ နိုင်ငံပေါင်း ၁၆၀အထိ၊ လူသားတိုင်းကြားနိုင်ပါသည်! ဘုရားသခင်ဘုန်းကြီးပါစေ! ကြီးမားသော အမှုပြီးပြီ၊ ချီးမွမ်းခြင်းသီးချင်းသီဆိုသည်!
ခမည်းတော်၊သားတော်၊ ဝိညာဉ်ဘုရားချီးမွမ်းကြလော့၊ အာမင်
(၁၆၃၇-၁၇၁၁၊ သောမခင်ရေးသားထားသော “ချီးမွမ်းခြင်းအသစ်”)။
နိုင်ငံအသီးသီးရှိ၊ ဒေသန္တရအမှုတော်ဆောင်တို့သည် ဤတရားဒေသနာကို မိမိတို့ဘာ သာစကားအားဖြင့် အီရန်၊ဆော်ဒီအာရေဗျာ၊ကူဝိတ်၊ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ဂျူးဘနှင့်တရုတ်နိုင်ငံစသော၊ အင်္ဂလိပ်သာသနာပြုဆရာများ၊ မသွားရောက်နိုင်သောနေ ရာဒေသသို့ မိမိတို့ဘာသာစကားအားဖြင့် ဟောကြားကြပါသည်။ များသောအားဖြင့် ခရစ်ယာန်အများအစုတို့ စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေကြသည်မှာ တတိယနိုင်ငံတို့၌ “ချမ်းသာ ကြွ၀ခြင်း၊ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း” ပျံ့နှံ့နေ၍ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယေရှုခရစ်တော်နှင့် ကားတိုင်ပေါ်သေခံခြင်းဒေသနာတော်ကို ၁၈ဘာသာစကားအားဖြင့် ဒေသန္တရတရားဟော ဆရာက သက်သေခံဝေငှာနေကြသည်။ ထိုဒေသန္တရတရားဟောဆရာတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏သာသနာပြုများပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဒေသနာစာမူကို အင်တာ နက်ဝက်ဆိုက်ဒ်ပေါ်ကကူးယူပြီး မိမိတို့ဘာသာစကားအားဖြင့် ဝေငှာနေခြင်းဖြစ်ပါ သည်။
ဝေနေယျလူအပေါင်းတို့ သမ္မာကျမ်းကို ကျင့်ဆောင်
ရှမ်းယိုးဒယား၊ တရုတ်ပြည်၊မြန်မာ၊ ပသျူး၊ ပသီ၊နိုင်ငံလူမျိုး
(၁၇၈၃-၁၈၂၆၊ ရေဂျယ်နယ်ဟတ်ဘာ သီကုံးရေးသားသော”သာသာနာတော်
ကျွန်ုပ်ဝင့်ကြွားပြောဆိုလိုသည်မှာ၊ တရားဒေသနာတော် ဗွီဒီယိုကို ကြည့်သောသူများ၊ တရားဒေသနာစာမူကို ဖတ်သောသူတို့က ကျွန်ုပ်တို့အား”ကူညီမစ” ကြမည်ဟုရဲဝံ့စွာပြောနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့တွင်း၌လုပ် ဆောင်စရာများပြီဆုံးခါနီးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဤကားတိုင်တရားဒေသနာတော်ကို ကြိုက်နှစ်သက်မည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်ဖက်အဖြစ်တစ်လကို ဒေါ်လာ၅၀ဖြင့် များစွာသောဘာသာစကားဖြင့် ယေရှု၏ကားတိုင်တော်တရားကို ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့ကူညီပါ ဝင်ကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်သော်၎င်း၊ ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းအား ဖြင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးသို့ သက်သေခံဝေငှါနိုင်ဖို့ကူညီသောသူ အရောက်စီတိုင်း ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ အာမင်! “တိုင်တော်နား” ဓမ္မသီချင်းသီဆိုသည်!
အကယ်၍ဒီကနေ့ မိတ်ဆွေအသက်တာမပြောင်းလဲသေးပါက၊ ကားတိုင်းပေါ် သင့်အဖို့အသက်ပေးသေခံသွားသော ယေရှုကိုယုံကြည်ကိုးစားလိုက်ပါ သင့်အပြစ်ကြွေး အားလုံးအဖို့သေခံပြီးရွေးနုတ်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သင့်အပြစ်ဆေးကြောရန် အသွေးတော်သွန်း လောင်းပြီဖြစ်သည်။ သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး၊ ကောင်းကင်ဘုံသို့ကြွသွားပြီး၊ သင့်ထာ၀ရအ သက်ရရှိဖို့ဆုတောင်းပေးနေပါသည်။ နောင်တရလျှက် ယေရှုကိုယုံကြည် လိုက်ပါ၊ သင့်အသက်တာထာ၀ရအတွက် အချိန်တိုင်းသင့်ကိုကယ်တင်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး”တိုင်တော်နား” ဓမ္မသီချင်းကိုသီဆိုကြစို့၊ သီချင်းသီဆိုနေစဉ် “အသက်တာမပြောင်းလဲသေးသူများ အနောက်ဘက် ဆွေးနွေးခန်းထဲသို့သွားကြပါ။ သင်းထောက်ကေကန်နှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသခင်ယေရှုကို ယုံကြည့်လက်ခံနိုင်ဖို့ ဆွေးနွေးတိုင်းပင်ကြပါစို့။ တိုင်းတော်နား! “ဘုရားသခင်၏သိုးသူငယ်” ဓမ္မသီချင်းသီဆို သည်!
-ဒေသနာတော် မတိုင်ခင် ဒေါက်တာဂရိတန်အယ်လ်ချန်မှ
၁ကော ၁း၁၈-၂၄ အထိကိုဖတ်ကြားပေးပါသည်။ -ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ် ဂရိဖက်စ်မှ ၁၈၇၃-၁၉၅၈ခုနှစ် ဂျော့ခ်ျ
ဘင်နတ်ရေးသားသော “ဝေးလှသောတော်ကုန်းပေါ်” ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေးပါသည်။